China Kukuya roller zvigadzirwa nevatengesi | BBMG
Chinyorwa Chinyorwa GB, EN, DIN, ASTM, GOST, JIS, ISO
Kugadziriswa Kwezvinhu Nokuchengetedza, Kukanda, Welding
Kurapa kwekupisa Kuwedzera, Normalizing, Q & T, Induction Kuomesa
Machine Kushivirira Max. 0.01mm
Kugadzira Roughness Max. Ra 0.4
Module yeGear 8-60
Kururama Kwemazino Max. ISO Giredhi 5
Kurema / Chidimbu 100kgs - 60 000kgs
Kushanda Kuchera, Cement, Kuvaka, Makemikari, Kuchera Oiri, Simbi Mill, Shuga Mill uye Simba Remagetsi
Chitupa ISO 9001
Pashure: Roller Press
Zvadaro: Slag yakatwasuka mill
Iyo chigayo chesimendi ndiyo michina iyo yekukuya simende mbishi zvinhu. Iyo yekushanda musimboti seinotevera: iyo mbishi zvinhu zvinodyiswa mukati inosimbisa pombi kuburikidza nematatu akateedzana mweya-kukiya mavharuvhu, uye chikafu chikafu chinopinda mukati memugayo kuburikidza nerutivi rweparadzanisa. Izvo zvinhu zvinowira pakati peiyo yekugaya disc nemhedzisiro yegiravhiti nemhepo kuyerera. Iyo yekukuya disc yakanyatso kubatana kune chinodzora uye inotenderera pane inogara ichimhanya. Iyo inogara ichimhanyisa grin ...
Slag yakatwasuka mill
Slag yakatwasuka chigayo yakashata mweya yekutsvaira mhando yekukuya michina, inozoomesa iyo slag nekukuya iyo slag. Iyo slag pasi nekukuya roller pane yekugaya disc inoumbwa nezvikamu zviviri: chikamu chidiki cheSlag nyowani ine yakakwira mvura yezvinyorwa uye yakawanda yepasi isina-kupera slag ine yakaderera mvura zvemukati. Ichi chikamu cheasina-kupera slag ndicho chinhu chakakombama chakadzoserwa mushure mekuparadzaniswa nesevha nekuda kwemahombekombe akakura. Iyo yakasimba isina kunaka kumanikidza mhepo yakakonzera ...
Iyo roller yekudhindisa ndiyo nyowani yekugaya michina yakagadzirwa pakati pe-1980s Iyo nyowani yekutsvaira nekukuya tekinoroji kunyanya inoumbwa neayo ine inoshamisa mhedzisiro mukuchengetedza simba, uye yakagamuchira kutarisisa kukuru kubva kune epasi rese simendi indasitiri. Yakave tekinoroji nyowani mukuvandudza yekugaya tekinoroji. Muchina unotora chinoshanda musimboti wakaderera simba kudyiwa kwepamusoro-kumanikidza zvinhu dura uye inotora iyo yekushanda modhi yeiyo imwechete PARTICIPLE cru ...
Iyo mbishi yakatwasuka yakatwasuka ndeimwe yemhando yemagayo anotenderera ane ma4 roller. Iyo yekukuya roller, rocker ruoko, chimiro chekutsigira uye hydraulic system inoumba iyo yekugaya magetsi unit, iyo yakakamurwa kuita mapoka mana uye yakarongedzwa kutenderedza yekugaya disc. Mune yehunyanzvi uye yehupfumi maonero, iyo mbishi yakamira yakatwasuka yakanyanyisa kugaya michina, ichienzaniswa neyechinyakare yekugaya michina, ine zvinotevera zvinotevera: ―Inogona kushandiswa kukuya zvinhu zvakasiyana